Bob Ross: Macallinka Wanaagsan ee Qof Kasta oo Hiwaayad u Leh Saliida Waa inuu Ogaadaa | Abuurista khadka tooska ah
Christina Zapata | | Fanaaniin
Ma jeceshahay inaad ku rinjiyeysid saliid laakiin waqti dheer ayaad ku qaadataa inaad ku dhameysato shaqo? ¿Waxaad rabtaa inaad si fudud u barato rinjiga Muuqaallo qurux badan oo si raaxo leh uga socda gurigaaga, bilaash iyo macallinka ugu fiican? Tani waa boostadaada.
Robert Norman Ross, oo ku magac dheeraa Bob Ross (1942 - 1995) wuxuu ahaa rinji-yahan Mareykan ah, macalin iyo soo-jeediye guul weyn kahelay barnaamijkii telefishanka ee 80-maadkii iyo 90-maadkii, Raaxada rinjiyeynta o Riyada Rinjiyeynta.
Laakiin waxay ahayd sannadihii ugu dambeeyay, mahadsanid YouTube, markii macallinka caanka ah ee Afro-haired uu gaadhay guushiisii ​​ugu waynayd, barnaamijka waxaa raacaya malaayiin dad ah oo adduunka ku nool.
Laakiin waa maxay waxa sidaas uga dhigaya mid guuleysta?
1 Rinji Geedo yar yar oo faraxsan ama geedo faraxsan
2 Wuxuu wax ka bartay macalin weyn
3 Soosaaray farsamada qoyan
4 Wuxuu sawiray shaqooyin waaweyn nus saac
5 Soojiidasho weyn
Rinji Geedo yar yar oo faraxsan ama geedo faraxsan
Dabeecaddiisa weyn iyo codkiisa jilicsan ayaa dhiirrigeliya rinjiyeynta muuqaallada aan caadiga ahayn ee ku soo kordha qof kasta, hadey jecel yihiin rinjiyeynta iyo haddii kaleba. Bob Ross wuxuu kaa dhigayaa mid lagaa qaado oo qaladaadkaaga ula dhaqmo sida shilal yar oo farxad leh ama shilal Farxad leh, haddii kale sawirku si fiican uma noqon doono. Shaqadiisu waxay ka careysiisaa muuqaalka quruxda badan ee Alaska, halkaas oo uu rinjiile ku noolaa sanado badan ka dib markii uu ka haajiray Florida, isaga oo la dhacay dabeecada meesha. Waxay ka buuxaan geedo yar yar oo faraxsan, ama geedo faraxsan, Daruur yaryar oo faraxsan ama Daruuro faraxsan, iwm.
Wuxuu wax ka bartay macalin weyn
Macallinkiisu wuxuu ahaa Bill Alexander, Rinjire Jarmal oo telefishanka ka soo bandhigay Sixirka rinjiyeynta saliida, barnaamijkii kahoreeyay ee Raaxada rinjiyeynta. Ross, oo u shaqeyn jiray farsamo yaqaan sameeya diiwaanada caafimaadka ee militariga, wuxuu daawan jiray showga wuxuuna raaci jiray raadkii Bill Alexander. Wuxuu u dhaqaaqay inuu noqdo sidiisa oo kale wuxuuna sawiray wakhtigiisa firaaqada ah inuu ka go'o shaqadiisa, halkaas oo uu ku noqday sajin ugu horeeya, taas oo ku qasabtay inuu noqdo nin dalbada oo adag dadka kale, taas oo uu neceb yahay.
Soosaaray farsamada qoyan
Inuu yahay Bill Alexander hormuudka farsamadan (in kasta oo ay jiraan rinjiyeyaal ilaa qarnigii XNUMXaad isticmaalay, waxaa loo aqoonsan yahay inuu caan ka dhigay), Bob Ross wuxuu si qurux badan u horumariyay. Waxay ku saleysan tahay had iyo jeer rinjiyeynta weelka qoyan, Dhigista lakabyada rinjiga iyadoon la engejin (maadaama badanaa lagu rinjiyeeyo farsamooyin dhaqameed), si midabbada u midoobaan oo u abuuraan saameyn kala duwan. Saldhigga sawirkani waa, maanta, sir. Bob wuxuu codsanayay Liquid Clear, oo ah walax lahaansho isla barnaamijkaas ah. Waxaa la rumeysan yahay inay ku jiraan nooc saliid ah oo ka dhigaya midabada mid dhalaalaya oo midab badan.
Wuxuu sawiray shaqooyin waaweyn nus saac
Mid ka mid ah astaamaha ugu naxdinta badan ee ka baxa telefishanka ayaa ah Ross wuxuu sameeyay shaqooyinkiisii ​​cajiibka ahaa ee farshaxanka kaliya… nus saac! Waad ku mahadsan tahay farsamada qoyan-qoyan, sawirada waxaa lagu sameyn karaa xawaare sare, si aysan u qalalin si farsamadan aysan u dhicin. Ross wuxuu raadiyay yaraantiisii hab rinjiyeyn ah oo kuu oggolaanaya inaad ku dhammaystirto tiro badan oo shaqooyin ah waqti aad u yar, si aad hadhow u iibiso oo aad u kasbato gunno. Shaqooyinkii uu qabtay intii lagu guda jiray baahinta barnaamijka waxaa loogu deeqay aasaaska, taasoo xaraashay iyaga si ay u taageeraan dadka liita.
Sidaan sheegnay, Bob Ross wuxuu shaashad weyn ku lahaa shaashadda horteeda. Kaliya maahan kalgacalka uu u rinjiyeeyay sawirradiisa oo uu ula hadlay daawadayaasha, laakiin sidoo kale muujinta jacaylka uu u qabo xayawaanka. Riwaayado badan, Ross wuxuu nagala hadlay sidii loo ilaalin lahaa deegaanka wuxuuna u keeni jiray dabagalo iyo xayawaanno kale meesha si loo baro dadka muhiimadda ay leedahay ilaalinta dabeecadda.
Maanta, waxaa jira dugsi magaciisa lagu xardhay oo caddaynaya macallimiinta horumarinaya farsamooyinkooda adduunka oo dhan. Waxa hubaal ah in qof walbaa la raaxeysan karo oo uu ku raaxaysan karo ranjiyeynta Bob Ross.
Maxaad sugeysaa inaad ku bilowdo rinjiyeynta saliidda sida farshaxan run ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Bob Ross: Professor-ka Farshaxanka ah ee Loogu Talo Galay Saliid Walba Waa inuu Ogaadaa